Filtrer les éléments par date : mercredi, 20 janvier 2021
mercredi, 20 janvier 2021 19:40
Inona moa zany no tena vitan'ny Ben'ny Tanàna Antananarivo Renivohitra izao?
Pilo kely : Inona moa zany no tena vitan'ny Ben'ny Tanàna Antananarivo Renivohitra izao?
- Lalana ?
- WC Public gratuit ?
- Easy Park foanana ?
- Parking ?
- Ny tsena? Ny misy aza narodana
- Ny fitohanana fiara? Ny lalana an'ny fiara, ny trotoire an'ny mpandeha an-tongotra, ny tsena an'ny mpivarotra?
- Ny urbanisme?
- Ny pompier ?
- Ny fanadiovana tanàna sy tatatra?
- Ny piscine municipale, ny Bibliothèque, ny tranom-pokonolona ?
- Ny biraom-ponkontany ?
- Ny EPP izay andraikitry ny Kaominina?
- Ny fandaminana ny fitaterana?
Mbola nitantara aza izy fa tsy hijaliana intsony ny jiro sy rano, ny fako moa dia efa tsy resahina.
Tsy haiko izay ataony mandeha vedette any amin'ny faritra andrefan'ny nosy iny, andeha atao hoe mitsangatsangana izy na olona mitovy.
Tafandria mandry aby, fa za andeha an'habaka hijery an'i Joe Biden manao fianianana amin'ny 08ora alina aty amintsika.
Vehivavy iray manodidina ny 35 taona any ho any no maty voahitsaky ny kubota tamin'iny lalàna mihazo an'Ambano iny.
Raha ny fanazavana azo dia samy hizotra hihazo an'Antsirabe, na ilay vehivavy, na ilay kubota, saingy nisy bisikileta iray nifanena ka nandona ilay ramatoa nitaingina biskileta hafa ka nampianjera azy tao ambanin'ilay kubota, ary naha voahitsaka ny lohany.
Novonjen'ny olona nentina nihazo ny mpitsabo ihany ilay ramatoa saingy tsy tana ny ainy.
Efa eo am-panaovana fanadihadiana ny mpitandro filaminana amin'izao fotoana.
Mahazo vahana aty Antsirabe amin'izao fotoana ity karazam-pitanterana kubota ity amin'ny fitaomana biriky, ary olana ho azy ireo ny tsy fahafehezana ny lalanan'ny fifamoivoizana.
mercredi, 20 janvier 2021 18:08
Etats-Unis : Hanao fianianana anio i Joe Biden
Anio alarobia 20 janoary amin'ny 12ora atoandro, ora any an-toerana (08ora alina aty Madagasikara), no hanao fianianana ny filoha amerikanina vaovao Joe Biden, andimby an'i Donald Trump.
Miaramila 25 000 no misahana ny fandriam-pahalemana, satria maro ireo mpomba ny filoha teo aloha Donald Trump no nampiseho fihetsika mahery, mitam-piadiana amin'izao fifindran'ny fahefana izao.
Donald Trump moa dia andray fiaramanidina force One farany, fotoana fohy alohan'io fianianana io, ka hiazo an'i Floride, fa tsy hanatrika izany lanonana izany izy.
Joseph Robinette Biden Jr.afohezina amin'ny hoe Joe Biden no anarany, teraka ny 20 novambra 1942 (78 taona mahery) tao Scraton Pennsylvanie izy. Senatera federaly ho an'i Delaware izy ny taona 1973-2009, ary voafidy ho filoha lefitra amerikanina izy ny taona 2009-2017, niaraka tamin'ny Filoha Barack Obama, ary izy voafidy ho filoha'i Etats-Unis izao.
Katolika ny lehilahy, ary izy no Katolika voalohany lany filoha lefitra, ary Katolika faharoa lany ho filoha taorian'i John Fitzgerald Kennedy tamin'ny taona 1961.
Mpikambana ao anatin'ny antoko demokraty i Joe Biden.
Joe Biden no filoha zokiny indrindra niditra ny Trano fotsy misy ny filoham-pirenena amerikanina.
mercredi, 20 janvier 2021 18:01
Miary Lamatihy - Sakaraha : Nitrangana halatra osy miaro fakana an-keriny
Ny alin'ny 16 janoary 2021 no nitrangan’ny halatra osy miaro fakana an-keriny tao Antsapana Kaominina Miary Lamatihy, Distrika Sakaraha.
Osy miisa 42 no nangalarina dahalo, ary olona 3 nataon’izy ireo takalonaina. Niditra ny ala zombitse ireo dahalo ireo.
Nifarimbona ny Zandary sy ny Fokonolona nanao fanarahan-dia. Nisy ny fifandonana.
Vokany, tafaverina avokoa ny osy rehetra, toy izany koa ireo olona 3 voatazon'ireo dahalo. Azo sambo-belona ny dahalo iray, karohina ireo namany.
mercredi, 20 janvier 2021 10:50
Mahitsy – Ambohidratrimo : Nitrangana fanafihana mitam-piadiana
Andian-jiolahy mitondra basy sy sabatra no mandroba ny tsena izay mbola nisokatra tao Mahitsy, Distrika Ambohidratrimo tokony ho tamin’ny 7ora hariva ny talata 19 janoary. Fivarotana maro no voatafika ary nitsoaka ireo jiolahy taorian’izay.
Mandray an-tanana ny raharaha ny Zandary.
mercredi, 20 janvier 2021 10:48
Marc Ravalomanana : Natoloran’ireo Loholona mpanao fanadihadiana ny dika mitovy ny tatitra nataon’izy ireo
Tonga teny amin’ny trano fonenan’ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana, teny Faravohitra ny talata 19 janaory 2021, ireo Loholona filohan'ny vaomiera mpanao fanadihadiana, nanatitra ny tatitra mikasika ireo fanadihadiana nataony mialohan'ny fiafaran'ny fe-potoana fiasan’izy ireo anivon’ny Antenimierandoholona.
Mikasika ny raharaha « doublons » tamin'ny fifidianana, ny fampidirana fitaovam-piadiana tsy ara-dalàna, ny raharaha tany amin'ny fonjan'i Farafangana izay nahafatesana voafonja, ary ny fitantanana ny vola natokana hiadiana amin'ny Covid-19 ny fanadihadiana.